Iko itsva yeB & O Beoplay H9 helmet inobatanidza Google Assistant - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM Iyo itsva yeB & O Beoplay H9 musoro wemusoro inosanganisira Google Assistant
Iko itsva yeB & O Beoplay H9 helmet inobatanidza Google Assistant
Sezvo kubuda kwevatsigiri vemazwi, musoro wepamusoro uye hurumende vatambi vave vachida kuzviisa mumiti yavo. Izvi ndezvechokwadi kumucheto wakakwirira, kusanganisira Bang & Olufsen.
Gore raAugust 2017 rave ikozvino, Bose akatanga shanduro itsva yeCQ35 headset, nekutsigirwa neGoogle Assistant. Kana iwe uchishandisa izwi reMountain View's mutsigiri wedijiti nguva dzose, shanduro yezvino yeheadset pasina Beoplay H9 Bang & Olufsen vanogona kukufarira.
Bang & Olufsen inozivisa shanduro yeBeoplay H9 helmet
Uyu muenzaniso mutsva unowirirana neGoogle Assistant. Ikoti inobatanidza kuita izvi bhodhi yakatsaurirwa inongomanikidza kuti iite wizard. Iyi haisi yega inoyevedza yakasarudzirwa. Bang & Olufsen aivawo nechinangwa chakanaka chekubatanidza bheteri yakakura.
Google Mutevedzeri anoshanda uye ane bateri mukuru
Musoro weH9i wakapiwa maawa anenge 18 yehupenyu hwebhetri asati apinda mubhokisi reloading. Iko itsva yeH9 inoona bheti yako kuwedzera 7 maawa akawanda okuteerera, maawa akawanda e25 pamutengo mumwe chete. Iro helmete yakakwana kune avo vanofamba kure zvikuru.
Zvinosuruvarisa, sezvinowanzoitika, zvinotengeswa neBang & Olufsen hazvina kumbobviswa. Iyo itsva H9 helmet haisi iyo. Kana iwe uchida, iwe unofanirwa kubhadhara yakakumbirwa 500 €. Inowanika ikozvino.
YouTube Music, kukundikana kwetsva kweGoogle?
High definition tsamba pa Amazon Music Unlimited pakuguma kwegore?
Amazon inogadzira sangano rayo rega rega re Amazon Music
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.begeek.fr/la-nouvelle-version-du-casque-bo-beoplay-h9-integre-google-assistant-316140
iPhone: imwe modem ye5G yakagadzirwa mukati kwete kwete 2025?
Kuti utange injini yekutsvaga, Qenge inotenderera (achiripo) kuMicrosoft - Tech - Numerama